Ogaden News Agency (ONA) – Agoonta Ogadenia Ee Xagardheere oo Deeq Lacag Ah Lagaadhsiiyay.
Agoonta Ogadenia Ee Xagardheere oo Deeq Lacag Ah Lagaadhsiiyay.
Posted by Dulmane	/ July 5, 2016
Waxaa xerada qoxootiga Xagardheer shalay galinkiihore deeqlacageed loogu qaybiyey Agoonta Somalida Ogadenia oo gaadhaysay 70 ilmood. Wakiilka Agoonta Ogadenia ee xerada qoxootiga xagardheer iyo laamaha lashaqeeya Mudane Cabdi Casiis ayaa sheegay in uu mashruucanu ku wajahan yahay Agoonta Somalida Ogadeniya ee kudhaqan xeryaha Dhadhaab iyo Faafi si ay oola ciidaan ciyaalka da dooda ah ee aabaha leh.
Mudane Cabdi Casiis iyo hogaamada lashaqeeya oo iyagu lacagta gacantooda ku gudoonsiiyay ilmo walba ayaa baaq, mahadcelin iyo bogaadin ah udiray dadka muslimiinta ah ee Ilahay dartii u soocawiyey Agoonta Ogadenia ee ku sugan xeryaha Qaxootiga Kenya.
Sidoo kale Hay’ada Daryeelka Agoonta ee Bariga Africa oo ah hay’ad ka howl gasha gudaha wadanka Kenya ayaa deeqdan mid lamid ah kabixisay xeryaha Dhagaxlay iyo Ifo iyo waliba magaalada Gaarissa ee xarunta Gobolka Woqooyi Bari Kenya, waxayna hay’adu gacanta ku haysaa Agoon aad ubadan oo kamid ah Agoonta Ogadenia.
Sikastaba ha ahaatee waxaa maanta sifiican looga farxiyay agoon badan oo kamid ah kuwa aabayowgood kuwaayay hala kooyinka kasocda dhulka Ogadenia waxayna agoontu uduceeyeen dadkii deeqdan soo gaadhsiiyay.